Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ịkpọ Ozu Ọkụ?
GỤỌ NKE Abkhaz Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bashkir Batak (Toba) Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hmong (White) Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kikamba Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Mongolian Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Romanian Russian Russian Sign Language Sango Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uruund Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zulu
O nweghị ebe Baịbụl kwuru kpọmkwem banyere ịkpọ ozu ọkụ. O nweghịkwanụ ebe Baịbụl nyere iwu na a ga na-eli ozu eli ma ọ bụ kpọọ ya ọkụ.
Baịbụl kwuru gbasara ndị fere Chineke ndị liri ndị ha nwụrụ anwụ. Dị ka ihe atụ, Ebreham gbara ezigbo mbọ nweta ebe ọ ga-eli Sera, nwunye ya.​—Jenesis 23:​2-​20; 49:​29-​32.
Baịbụl kwukwara gbasara ndị fere Chineke ndị kpọrọ ozu ndị nwụrụ anwụ ọkụ. Dị ka ihe atụ, mgbe e gburu Eze Sọl nke Izrel na ụmụ ya nwoke atọ n’agha, ozu ha tọgbọ n’ebe ndị iro ha ji ha mere ihe masịrị ha. Mgbe ndị dike Izrel nụrụ banyere ya, ha gara buru ozu Sọl na ụmụ ya, kpọọ ha ọkụ ma lie ọkpụkpụ ha. (1 Samuel 31:​8-​13) Baịbụl gosiri na nke a bụ ụzọ dị mma e nwere ike isi lie ozu ụmụ nwoke ndị ahụ.​—2 Samuel 2:​4-6.
Ihe ụfọdụ na-abụghị eziokwu banyere ịkpọ ozu ọkụ
Ụgha: Ịkpọ ozu ọkụ bụ ịkparị onye ahụ nwụrụ anwụ.
Eziokwu: Baịbụl kwuru na ndị nwụrụ anwụ na-alaghachi n’ájá, nke bụ́ ihe na-emekarị ozu ma o ree. (Jenesis 3:​19) Ịkpọ ozu ọkụ na-enye aka mee ka ozu ahụ ree ngwa ngwa ma ghọọ ntụ ma ọ bụ ájá.
Ụgha: Ọ bụ naanị ndị ha na Chineke na-adịghị ná mma ka Baịbụl kwuru na a kpọrọ ozu ha ọkụ.
Eziokwu: E nwere ndị nupụụrụ Chineke isi Baịbụl kwuru na a kpọrọ ozu ha ọkụ, dị ka Ekan na ndị ezinụlọ ya. (Joshụa 7:25) Ma nke a bụ ihe mere naanị otu ugbo, emeghị ya ka ọ bụrụ iwu. (Diuterọnọmi 21:​22, 23) Dị ka anyị kwuru ná mbụ, e nwedịrị ndị rubeere Chineke isi a kpọrọ ozu ha ọkụ, dị ka Jọnatan, nwa Eze Sọl.
Ụgha: Chineke agaghị akpọlite onye a kpọrọ ozu ya ọkụ.
Eziokwu: Ihe ọ bụla e mere ozu agaghị egbochi Chineke ịkpọlite onye nwụrụ anwụ, ma e liri ya n’ala, kpọọ ya ọkụ, onye ahụ ò furu n’ime osimiri, ma ọ bụ anụ ọhịa tagburu ya. (Mkpughe 20:13) Ọ gaghị esiri Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ike inye onye ahụ ahụ́ ọhụrụ.​—1 Ndị Kọrịnt 15:​35, 38.
Gịnị Ga-enyere Gị Aka Ikpebi ma Ị Ga-eli Ozu Eli ma Ọ Bụ Kpọọ Ya Ọkụ?
Mgbe ị na-ekpebi ihe a ga-eme ozu, chebara ihe ndị a echiche.
Gịnị ka onye ahụ nwụrụnụ chọrọ? Baịbụl kwuru na e nwere oge ndị ezinụlọ onye ahụ nwụrụnụ mere ihe onye ahụ kwuru ka e mee ozu ya tupu ya anwụọ.​—Jenesis 50:​4, 5; Ọpụpụ 13:19.
Gịnị ka a na-emekarị gburugburu ebe i bi? Nke a na-esokarị ekpebi ihe a ga-eme ozu. (Jọn 19:40) Dị ka ihe atụ, n’oge Baịbụl, ndị mmadụ na-elikarị ndị ha nwụrụnụ eli. (Jenesis 49:31; 1 Samuel 28:3) Otú ahụ ka ọ dịkwa taa, mmadụ nwere ike ikpebi ime ozu otú ọ bụla ndị mmadụ na-emekarị n’ebe o bi ma ọ bụrụhaala na ihe ahụ emegideghị ihe Baịbụl kwuru.
Gịnị ka iwu obodo kwadoro ka a na-eme? Baịbụl gwara anyị ka anyị na-erubere ndị ọchịchị isi. (Ndị Rom 13:1) N’ebe ụfọdụ, ndị ọchịchị na-eji aka ha nye iwu otú a ga-esi mee ozu. Dị ka ihe atụ, n’ihe gbasara ịkpọ ozu ọkụ, n’obodo ụfọdụ ndị ọchịchị na-agwa ndị mmadụ ebe ha nwere ike iwụfu ntụ fọdụrụnụ ma a kpọchaa ozu ọkụ.
Olee otú ndị ọzọ si ele ya anya? Akwụkwọ Nsọ gbara anyị ume ka anyị na-achọ ọdịmma ndị ọzọ. (Ndị Filipaị 2:4) Mgbe anyị na-ekpebi ihe anyị ga-eme ozu, ọ dị mma ka anyị chebara ajụjụ ndị a echiche: Olee otú ndị ezinụlọ anyị na ndị ọzọ si ele ịkpọ ozu ọkụ ma ọ bụ ili ya eli anya? Olee otú ndị mmadụ n’ebe anyị bi si ele ya anya?
Ndụ na Ọnwụ Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
Ndị nwụrụ anwụ hà ma ihe na-emenụ?
È kwesịrị ịkpọ ozu Ndị Kraịst ọkụ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Gbasara Ịkpọ Ozu Ọkụ?
ijwbq isiokwu 144